UKUHLALWA KWEZOMTHETHO NGOTYALO-MALI lweBulgaria | IXESHA LE-100% LEMPUMELELO | YOKWENZIWA NOKUBHALA | IGISA LOKUGQIBELA laseBulgaria, ukuhlala kutyalo-mali iBulgaria, ukuhlala ngokutyala iBulgaria, ukuhlala ngeenkqubo zotyalo-mali iBulgaria, ukuhlala ngenkqubo yotyalo-mali iBul.
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali lweBulgaria kunye neGolden Visa
Sinikezela ngeeNkonzo zoFuduko lwezoQoqosho eBulgaria:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBulgaria
● Ubummi ngotyalo-mali oluvela eBulgaria
● IVisa yegolide eBulgaria
● Ipasipoti yesibini evela eBulgaria
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBulgaria ngokutyala izindlu nomhlaba
Best Iiarhente zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali eBulgaria Kunye namagqwetha ee Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eBulgaria kunye nabarhwebi beepropathi zokuba ngumhlali eBulgaria basebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali zeBulgaria zibonelela ngeenkonzo zokuhlala ngokutyala eBulgaria, ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo mali eBulgaria, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo mali eBulgaria, ukuhlala kwakhona kwesibini ngotyalo mali eBulgaria, ukuhlala kabini ngobutyalo-mali eBulgaria, ubumi kunye nokuhlala ngokutyala eBulgaria. , Indawo yokuhlala isigxina ngotyalo-mali eBulgaria, Ukuhlala okwethutyana ngotyalo mali eBulgaria, Ukuhlala kwakhona ngesikimu sotyalo mali eBulgaria, Ukuhlala kwakhona ngezikimu zotyalo mali eBulgaria, Ubummi ngotyalo mali eBulgaria, Ubummi ngeenkqubo zotyalo mali eBulgaria, Ubumi ngenkqubo yotyalo mali eBulgaria, okwesibini Ubummi ngotyalo-mali eBulgaria, ubumi bobabini ngotyalo-mali eBulgaria, indawo yokuhlala kunye nokuba ngummi ngotyalo-mali eBulgaria, ukuhlala kunye nokuba ngummi ngotyalo-mali eBulgaria, iinkqubo zoBumi kwezoqoqosho eBulgaria, Ubummi ngesikimu sotyalo-mali eBulgaria, Ubummi ngezikimu zotyalo-mali eBulgaria, okwesibini ipaspoti kwi IBulgaria, iipasipoti yesibini eBulgaria, inkqubo yesibini yokundwendwela eBulgaria, ipasipoti yesibini yesibini eBulgaria, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini eBulgaria, ipasipoti yesibini yezopolitiko eBulgaria, ipasipoti yesibini ngokutyala eBulgaria, ipasipoti yesibini yokuba ngummi eBulgaria, inkqubo yesibini IBulgaria, iskim sepasipoti yesibini eBulgaria, visa yegolide eBulgaria, iiVisa zegolide eBulgaria, iinkqubo zevisa zegolide eBulgaria, inkqubo yegosa yegolide eBulgaria, yesibini visa yegolide eBulgaria, inkqubo yesibini yegosa yegolide eBulgaria, iVisa yegolide kabini eBulgaria, ubumi kunye ne-visa yegolide eBulgaria, indawo yokuhlala kunye ne-visa yegolide eBulgaria, ubumi begolide begolide eBulgaria, isikimu sevisa segolide eBulgaria, izikimu zevisa zegolide eBulgaria.
"Izisombululo ezi-1 zokuyeka" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala imali eBulgaria ngenkxaso eyongezelelweyo.
Utyalo-mali oluncinci eBulgaria lokuHlala kwakhona ngokutyala: EUR 512,000
Intshayelelo IBulgaria kunye nokuhlala kwakhona ngoTyalo mali
Funda nzulu ngeBulgaria
IBulgaria ikhethwe ngabantu abahlukeneyo baseBritane abafuna ukubuyela ekhaya okanye kwimibutho esekwe kwi-Intanethi emhlabeni ngenxa yenkcazo ethile yokuba iirhafu zabo zingaphantsi. Enye inkcazo emva kokhetho olwenziwe ngaba bantu lixabiso eliqhelekileyo lezinto ezisisiseko eBulgaria.
IBulgaria luhlanga olunendawo yokuhlala efanelekileyo, iindawo zokutyela, kunye noomatshini basekhaya xa kuthelekiswa nentsalela ye-European Union.
Ukufudukela kwilizwe elikude ngokufuthi kuthetha ukuziqhelanisa nolunye uhlobo lobomi. Ke, kwimeko apho ufudukela eBulgaria, kufanelekile ukwazi malunga nendlela yabemi yokuphila kunye nemihla ngemihla. Uya kugcina nemibhiyozo yesiko, yentlalo, kunye nengqongqo. Nangona kunjalo, ngaphambili koko, ngabantu abanamandla kakhulu, abaxakekileyo emsebenzini kwaye bafumanisa ngakumbi ithuba elifanelekileyo lokuzilolonga, umzekelo, ukuloba, imidlalo yasebusika, ukuzibophelela, njalo njalo
Ngelixa imibhiyozo embalwa inconywa ngemihla ecacileyo, abanye bajikeleza ngePasika. Ngokubhekisele kwiKrisimesi, inconywa kumacandelo amabini, elokuqala nge-24 kaDisemba kusasa laze elesibini nge-25 kaDisemba kwindlu yenkonzo elandelwa sisidlo sasemini esimyoli.
Ukuqiniseka, amasiko ambalwa akhoyo ngoku asathathelwa ingqalelo nangona iBulgaria ngoku sele isisizwe esineenkani.
Uninzi lwabantu baseBulgaria basetyenziselwa ukuya elunxwemeni lolwandle kwaye baxabise ukutya.
Kubantu abaninzi, indlela yokuphila ehamba nokuhlala eBulgaria yeyona nto inomdla. Ukuzijikisa elunxwemeni ngasekupheleni kwentwasahlobo, ukuskiya ebusika, ukudlala igalufa, kunye nokuhambahamba ezintabeni zonke zizinto zokuzihlaziya onokuzixabisa. Indawo enkulu yaseBulgaria inika amathuba amatsha amaninzi.
Iigusha neebhokhwe zibhadula esidlangalaleni kumasimi angenazindonga, kwaye abantu abaninzi abahlala eluntwini baphuhlisa imveliso yabo ekhaya. Nangona kunjalo, ngelixa uhlala eBulgaria kumnandi, kukho iingcebiso zokhuselo onokwazi ngazo. Iipokpokethi zisebenza kwiindawo ezisezidolophini kunye neendawo zokuchithela iiholide, ngakumbi kwimimandla epakishwe njengokuhambisa kunye neendlela ezihleliyo. Kubekho ulwandiso ekubanjweni kwendawo yokuhlala kwiindawo ezaziwayo zabahambi. IBulgaria isebenza ngesakhelo somsebenzi kwinqanaba apho iindleko zomntu kunye nezorhwebo ngo-2011 ziyi-10% kuzo zonke iimeko. Nabani na onethemba lokunciphisa umlinganiso womsebenzi abawuhlawulayo kumvuzo wabo okanye izibonelelo zeshishini ngale ndlela, ngokuqinisekileyo iBulgaria iyathandeka!
Iindleko zokulala eBulgaria kunye nokutya ngokucacileyo ziphantsi kwenxalenye enkulu yesiqhelo kwi-EU.
Iindleko zepropathi eBulgaria ziye zahlala phantsi ukusuka kumanqwanqwa alandelayo emva kokunyuselwa kwe-EU-okuthetha ukuba kunokwenzeka ukuthenga indawo efanelekileyo kwilizwe liphela, (ngaphandle kweendawo ezikhethiweyo zasemaphandleni eSofia), ngokungaphantsi kakhulu kunokuba ubuya kuhlawula e-UK ngokulula . Ukuqeshisa eBulgaria ngokwesiqhelo ngama-74.06% asezantsi kunase-UK.
Ngokwesiqhelo umzamo omncinci wokuphila ngumzobo omkhulu. Abantu abadla umhlala-phantsi banokufumanisa ukuba umvuzo wabo we-annuity uhambela phambili eBulgaria-kwaye banokufumana inzuzo ngokuhamba kuba bengayi kuxhomekeka kuqoqosho olusondeleyo ukubanika imali.
Iinkcukacha ezisisiseko zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali lweBulgaria
Ubuncinci botyalomali Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBulgaria
Imirhumo eyongezelelweyo visa yegolide ye Bhulgariya
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBulgaria
D ikhadi lokuhlala ngokusisigxina
Iqhubekeka nexesha lokuhlala ngokutyala eBulgaria
Emva kokubamba i-PR yonyaka omnye
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseBulgaria
Iinketho zotyalo mali ze Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBulgaria
I-512,000 ye-capital capital / iibhondi zikaRhulumente (i-PR inikwe kwangoko)
€ 250,000 kwiziko leshishini (ukuhlala nje okwethutyana)
€ 300,000 kwiarhente yokuthengiswa kwezindlu (ukuhlala okwethutyana kuphela)
€ 1 yezigidi zeerandi zorhwebo / iibhondi zikaRhulumente (Ubumi emva kweminyaka eyi-1-2 phantsi kwendlela ekhawulezayo)
Kutheni uye kuhlala kwindawo yokuhlala ngokutyala iBulgaria
IBulgaria lilungu le-European Union kwaye iya kuba lilungu lendawo yaseSchengen kwikamva elikufutshane. Yiloo nto ilizwe linikezela ngenkqubo yokubonisa i-visa. Ubummi baseBulgaria bungakunika ilungelo lokujikeleza iYurophu ngaphandle kwevisa. Emva kweminyaka emi-2 yexesha lokuqhubekeka uya kuba nakho ukonwabela izibonelelo zokuba ngumhlali osisigxina eBulgaria. Izibonelelo zibandakanya iirhafu eziphantsi, ukufikelela kwimarike ye-European Union kunye nezinye ezininzi. Ukufumana ubumi baseBulgaria akufuneki ukuba ulwazi ulwimi okanye ube ngumnini wezindlu. Emva kokufumana ubumi baseBulgaria unokuhamba ngokulula kwaye uhlale nakweliphi na ilizwe le-EU.
Ukufudukela kosapho eBulgaria
Izibonelelo zokuhlala ngokusisigxina eBulgaria zisetyenziswa kuwo onke amalungu osapho. Emva kokuba ufumane indawo yokuhlala yaseBulgaria iqabane lakho kunye nabantwana bakho banokufumana indawo yokuhlala yaseBulgaria ngokusekwe kumanyano losapho.
Indawo yokuhlala ngenkqubo yotyalo mali eBulgaria
Uqala ube yindawo yokuhlala esisigxina ukuya kuthi ga kwiinyanga ezilithoba. Ngeli xesha kuya kufuneka undwendwele iBulgaria amatyeli amabini kunye noMmeli waseBulgaria kwilizwe lakho. Emva kokulungiswa kwefayile yakho, uya kucelwa ukuba uthumele inani lotyalo-mali lwe-BGN 1 yezigidi (i-EUR 512,000). Xa kukhutshwa isatifikethi sotyalo-mali lwakho unokufaka isicelo kuhlobo lwe-D lweVisa. Xa ufumana i-visa yakho, undwendwela iBulgaria kwaye ungenise isicelo. Ngexesha elizayo xa undwendwela ukufumana ikhadi lakho lokuhlala ngokusisigxina. Emva kokufumana ikhadi lakho lokuhlala ngokusisigxina, amalungu osapho lwakho anokufumana awabo ngokungenisa ifom yesicelo. Umenzi-sicelo uya kucelwa ukuba atyelele iBulgaria amatyeli amabini.
Imfuno yemali yeBulgaria
Uyacelwa ukuba ubeke i-BGN 1 yezigidi (i-appr. I-EUR 512,000) kwiPotifoliyo yeBhondi kaRhulumente isithuba seminyaka emi-5. Emva kweminyaka emi-5 uya kuyifumana imali yakho kodwa ngaphandle kwenzala. Urhulumente waseBulgaria uqinisekisa ukuba uza kuyifumana imali yakho emva kwexesha. Isixa sotyalo-mali sinokuxhaswa ngemali yibhanki yaseYurophu. Umrhumo wokuqhubekiswa kwe-EUR 25,000 uyasebenza. Imali eyongezelelweyo inokufunwa kubantwana abangenayo i-18. Intlawulo yabantwana iya kuba yi-EUR 2,500.
Inkxaso yabathengi kubuhlali ngokutyala imali eBulgaria
Iqela lethu Kuhlala ngaBameli boTyalo mali baseBulgaria kwaye Kuhlala ngoTyalo-mali Amagqwetha eBulgaria ibonelela abathengi kunye neentsapho zabo eBulgaria ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali oluvela eBulgaria, indawo yokuhlala ngokutyala imali evela eBulgaria kunye namanye amathuba okungena kwelinye ilizwe, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngobutyalo-mali obuvela eBulgaria okanye kwiVisa yaseGolden evela eBulgaria okanye ubumi ngotyalo-mali oluvela eBulgaria okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda nakwezona mali zilungileyo zokufumana izindlu eBulgaria, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani IBulgaria okanye kude nonxweme, izibonelelo zabasebenzi eBulgaria nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwezemali nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi ngaphakathi nase-Bulgaria nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo kubemi baseBulgaria:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali iBulgaria, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena I-Bulgaria, abarhwebi abafudukela kwamanye amazwe abafikelelekayo eBulgaria, indawo yokuhlala efikelelekayo ngabacebisi botyalo-mali eBulgaria, indawo yokuhlala efikelelekayo ngamagqwetha otyalo mali eBulgaria kunye nefemu yokubonelela ngokufuduka eBulgaria.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukusuka eBulgaria ukuya kumazwe angama-37.
I-visa yegolide eBulgaria kumazwe angama-37.
Ubumi ngokutyala imali ukusuka eBulgaria ukuya kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka eBulgaria ukuya kumazwe angama-37.
Ukufuduka okusekwe kwishishini ukusuka eBulgaria ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela eBulgaria.
Iinkqubo zeVisa zegolide eBulgaria ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi beenkqubo zotyalo-mali ukusuka eBulgaria ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka eBulgaria ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka eBulgaria ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali lweBulgaria ngeeNdawo zokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo-mali lokuthengiswa kwezindlu eBulgaria ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali eBulgaria, nanini na, xa befuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo lokuba ngabahlali ngokutyala iBulgaria. Sidibene nabaphuhlisi abambalwa bezindlu eBulgaria abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezintle eBulgaria, befumana eyona mbuyekezo.
Eyona nkqubo yokuhlala kwabemi baseBulgaria ngeyona mali yotyalo mali kwiarhente yezindlu eBulgaria
Kufuneka uyazi-Indawo yokuhlala yaseBulgaria ngoTyalo-mali
Ukuhlala kwakhona ngeGqwetha loTyalo-mali kwiBulgaria kuya kubonelela ngoncedo olunamaxwebhu ngoncedo lokuhlala kwakho ngempumelelo ngozaliso mali eBulgaria. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zokuba nguMhlali ngokuTyala kwiBulgaria zibandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka eBulgaria okanye eBulgaria, ngokusekwe kwiziphakamiso ezinokwenziwa
Siqala ngenkuthalo ngenxa yokukhuthazeka, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuba ngumhlali ngokutyala imali eBulgaria kubaxhasi ukuze bafumane imvume yokuhlala eBulgaria kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo yeBulgaria, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubele phambili kunye nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sotyalo mali kwiBulgaria siya kufuna iikopi ezivavanyiweyo zabathengi kunye namalungu epasipoti.
Inguqulelo kunye ne-apostile yamaxwebhu Ukuhlala kwakhona ngesicelo sotyalo mali seBulgaria. Amagqwetha ethu akhethekileyo oBuhlali ngokuTyala imali eBulgaria kunye negosa legolide liya kunceda ekugcwaliseni iifom kunye namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu akho kunye nawosapho lwakho ahlalise isicelo sotyalo-mali seBulgaria sele silungile, siya kuyizalisa ngabasemagunyeni baseBulgaria.
Nje ukuba isicelo sakho sokuhlala ngokutyala iBulgaria sivunyiwe, sabelana nawe ngeendaba ezimnandi kwaye siqala ukulungiselela ezinye inkxaso.
Asikuxhasi okanye ukubonelela ngobumi ngeenkonzo zotyalo mali eBulgaria kubantu abakhankanywe apha ngezantsi okanye amashishini eBulgaria:
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali zeBulgaria azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo kunye neembumbulu ukusuka okanye eBulgaria.
Kuhlala ngeenkqubo zotyalo mali zeBulgaria azinikezelwa kuhlolo lobuchwephesha eBulgaria okanye kwi-espionage yemizi-mveliso yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya eBulgaria.
Kuhlala ngokubonisana notyalo mali kwiBulgaria awanikezelwa ngayo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho eBulgaria.
Kuhlala ngenkxaso yotyalo mali eBulgaria ayisiyonto yabantu abajongana nemathiriyeli yemfuzo eBulgaria.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali zeBulgaria ayisiyo yamashishini ajongene nezixhobo eziyingozi okanye ezinobungozi zebhayoloji okanye zenyukliya eBulgaria.
Kuhlala ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeBulgaria ayifumaneki kubantu baseBulgaria ejongene norhwebo, ukugcinwa eBulgaria, okanye ukuhanjiswa kwamalungu oLuntu.
Kuhlala ngotyalo-mali eBulgaria ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Kuhlala iinkonzo zenkqubo eBulgaria ayizizo ezenkolo kunye noncedo lwabo eBulgaria.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Bhulgariya ayibonelelwa ngabantu abajongana neMifanekiso engamanyala eBulgaria.
Indawo yethu yokuhlala Amagqwetha eBulgaria abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eBulgaria.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo okulumkisa ukuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubaxhasi beBulgaria kunye ne-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva malunga nokwaliwa kwabasemagunyeni eBulgaria ukuvunywa kwesicelo Kuhlala ngotyalo-mali eBulgaria.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBulgaria nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngoBumi obuBalaseleyo ngenkxaso yotyalo mali eBulgaria yotyalo-mali, yokufudukela kwelinye ilizwe kunye nokucwangciswa kwezindlu eBulgaria.
Ixhaswe kukuhlala kwamazwe ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho waseBulgaria, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Indawo yethu yokuhlala ngeenkonzo zotyalo mali zeBulgaria zibonelela ngexabiso eliphantsi, ngezinga lempumelelo eBulgaria.
Sithathe iminyaka yamava okuhlala kwakhona eBulgaria exhasa abathengi kunye neentsapho zabo kwiBulgaria.
Amava okuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eBulgaria kunye nabameli bezomthetho eBulgaria ababonelela ngenkxaso kubaxhasi.
Sinezona solicitors zibalaseleyo kunye neearhente zokuphatha inkqubo yaseBulgaria kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eBulgaria nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu kwiBulgaria
Sinamava aphesheya kubuhlali ngokutyala kubandakanya iBulgaria, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko apho ukuhlala kwakho ngokutyala imali eBulgaria kungaphumeleli, kukho amanye amazwe angama-36 esiwenzayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zokuhlala kwakhona ngokuTyala imali eBulgaria
Ukubala iindleko zokuhlala kwakhona ngokutyala imali eBulgaria nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi beBulgaria, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zokuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eBulgaria kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa eBulgaria
Inkqubo yemvume yokusebenza eBulgaria
Ukuhlala okwethutyana eBulgaria
Indawo yokuhlala isigxina eBulgaria
Oonozakuzaku kunye nabathunywa baseBulgaria
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eBulgaria kunye nezinye iinkonzo
Sidwelise ezinye iinkonzo ezimbalwa esizibonelelayo eBulgaria malunga neemfuno zangoko okanye ezizayo.
Ukuba ucwangcisa ukufuduka nosapho lwakho ukuya eBulgaria ngokutyala, thina njengeqabane lakho eBulgaria, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo eBulgaria ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kokuhlala ngokubonisana notyalo mali eBulgaria, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo zeHR nakwiBulgaria, ongenakufumana phantsi kwesinye isambrela esinikezwe ngabaphi na abanye abacebisi baseBulgaria abasenza ivenkile yokumisa ibulgaria kunye namazwe angama-106.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nakwihlabathi liphela kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye nezorhwebo eBulgaria ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yabathengi bethu engaphaya kokuhlala ngokutyala iBulgaria ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokudibana eBulgaria nakwamanye amazwe.
Singakunceda bhalisa inkampani eBulgaria okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani eBulgaria zitshiphu kunye nathi.)
Iakhawunti yeBhanki eBulgaria
Nawuphi na umtyalomali ofudukela eBulgaria uya kuyidinga iakhawunti yebhanki yakho eBulgaria kunye neakhawunti yebhanki yenkampani eBulgaria, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Isango lokuhlawula eBulgaria
Ngaba ufuna ukubonisana eBulgaria, kuba Izisombululo zentlawulo yedijithali eBulgaria Njengendlela yokuhlawula yesiko okanye yefintech eBulgaria okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali IBulgaria ukuba ucwangcisa qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho eBulgaria ukuqala kwangoko eBulgaria.
Iinkonzo zabasebenzi eBulgaria
yethu Inkampani yabasebenzi eBulgaria inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona izithuba zesithuba eBulgaria free.
Iinombolo zeFowuni eyiNene kwiBulgaria
Iinkqubo zeefowuni zeshishini zeBulgaria kunye amanani abonakalayo eBulgaria Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali eBulgaria
Accounting, ngenxa yenkuthalo eBulgaria kunye okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo eBulgaria
Ukuseta ishishini eBulgaria
Emva kokuhlala ngokutyala eBulgaria, ukuseta ishishini kwi Bhulgariya.
Sinikezela ngezisombululo ezisezantsi ze-IT eBulgaria
Uyilo lwewebhu eBulgaria
Uphuhliso lwezorhwebo eBulgaria
Uphuhliso lwewebhu eBulgaria
Uphuhliso lweBlockchain eBulgaria
Uphuhliso losetyenziso eBulgaria
Uphuhliso lweSoftware eBulgaria
Amagqwetha okuHlala kwakhona ngoTyalo mali eBulgaria
Sibonelela ngokuhlala ngokusemthethweni kwezisombululo zotyalo-mali kwiBulgaria kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, kuba iBulgaria, sizinkokeli, ifemu yethu yezomthetho eBulgaria ineearhente zokufudukela eBulgaria, sinedumela lokuhambisa awona mava okusebenza kwabathengi eBulgaria kunye Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu baseBulgaria kunye neentsapho zabo. Indawo esihlala kuyo liqela lotyalo-mali eBulgaria libonelela ngezixazululo eziyimpumelelo kubathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala eBulgaria, kwimvume yakho yokuhlala eBulgaria yamkelwe.
Amandla egqwetha laseBulgaria ayafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngu-Residency ngabameli begunya lotyalo-mali eBulgaria. Ukuba uhlala eBulgaria okanye uceba ukutyelela iBulgaria, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani eBulgaria kude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kummandla waseBulgaria. Kuxhomekeka kwilizwe lokuhlala kwakho, kufanele ukuba kukhutshwe umthetho okanye kumiswe ngokusemthethweni ngummeli waseBulgaria.
Imibuzo ebuzwa rhoqo -Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eBulgaria
Iyintoni inkcazo yokuhlala ngokutyala eBulgaria?
Ukuhlala kwakhona kutyalo-mali eBulgaria, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala yaseBulgaria ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseBulgaria ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, neshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala imali eBulgaria, ukuhlala ngenkqubo yotyalo mali eBulgaria. ixhaswe kukuhlala ziinkonzo zotyalo mali eBulgaria, ngokuhlala kwethu okugqwesileyo ngamagqwetha otyalo mali eBulgaria, indawo yokuhlala eyiyo ngamagqwetha otyalo mali eBulgaria kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi botyalo mali eBulgaria, abasebenza ngokuhlala kakuhle ngabameli botyalo mali eBulgaria, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela kwelona liphezulu. eBulgaria.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo mali kwiBulgaria | Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eBulgaria | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eBulgaria | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eBulgaria | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo mali eBulgaria
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngotyalo-mali eBulgaria?
Ubummi ngotyalo-mali eBulgaria, bunokuchazwa njengokufumana ubumi baseBulgaria ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseBulgaria ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl njl. Faka isicelo sokuba ngummi ngotyalo-mali eBulgaria, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali yaseBulgaria exhaswa bubummi beenkonzo zotyalo-mali zeBulgaria, ngobumi bethu obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eBulgaria, abemi abangcono kakhulu ngamagqwetha otyalo-mali eBulgaria kunye nobumi obugqwesileyo ngabacebisi botyalo-mali baseBulgaria. ubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo mali eBulgaria, kunye neefemu zokubonisana nabantu abafudukela eBulgaria.
Iinkonzo zongenelelo kubatyali mali eBulgaria | Amaxabiso afikelelekayo okufudukela eBulgaria | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha eBulgaria | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha aseBulgaria | Abatyali mali abangenakufikeleleka kwiBulgaria | Iifemu zomthetho wofuduko olufikelelekayo eBulgaria
Ithini inkcazo yepasipoti yesibini eBulgaria?
Ipasipoti yesibini eBulgaria, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni baseBulgaria ngokutyala imali kuqoqosho lwaseBulgaria ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Iinkonzo zokundwendwela zesibini zeBulgaria, ngokusebenzisa amagqwetha ethu esibini epasipoti eBulgaria, awona magqwetha epasipoti aphezulu eBulgaria kunye nabacebisi beepaspoti besibini abaseBulgaria, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela zesibini eBulgaria, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eBulgaria.
Iinkonzo zokundwendwela yesibini zeBulgaria | Iiarhente zokundwendwela zesibini eBulgaria | Amagqwetha esibini epasipoti eBulgaria | Amagqwetha esibini epasipoti eBulgaria | Abacebisi bokundwendwela besibini eBulgaria
Yintoni inkcazo yevisa yegolide eBulgaria?
I-visa yegolide eBulgaria, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala eBulgaria ngokutyala imali kuqoqosho lwaseBulgaria ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, izindlu nomhlaba, njl. Faka isicelo sevisa yegolide eBulgaria, inkqubo yegosa yegolide yaseBulgaria exhaswa ngu Iinkonzo zeVisa zegolide zeBulgaria, ngokusebenzisa amagqwetha egosa eVisa egolide eBulgaria, abona bagqwetha bevisa abasemagqabini begolide eBulgaria kunye nabacebisi begosa abagqwesileyo begolide eBulgaria, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide eBulgaria, kunye neefem zokubonelela ngokufudukela eBulgaria.
Iinkonzo zevisa ezimnandi zeBulgaria | Iiarhente zevisa zegolide eBulgaria | Amagqwetha egosa egolide eBulgaria | Amagqwetha egosa egolide eBulgaria | Abacebisi ngevisa abasemagunyeni eBulgaria
Lithini elona mali lisezantsi lokuhlala ngokutyala eBulgaria?
Ubuncinci botyalo-mali kubuhlali ngokutyala eBulgaria yi-EUR 512,000.
Ngaba ubonelela ngenkxaso yezomthetho kwiBulgaria yoBuhlali ngokuTyala imali?
Ewe, igqwetha lethu eBulgaria kunye neearhente eBulgaria zibonelela ngenkxaso yokuhlala kwakhona ngokutyala eBulgaria.
Ngaba ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali eBulgaria kubiza?
Iindleko zokuhlala kubuTyalo-mali kwiBulgaria kunye nokuHlala kwakhona ngeemfuno zengxowa mali yotyalo-mali zeBulgaria yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo wokubonisana ngoBuhlali ngoTyalo-mali ukuya eBulgaria, sikwabonelela ngenkxaso-mali eninzi yoBuhlali kwakhona ngezisombululo zotyalo mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokufaka isicelo sokuhlala ngokutyala kwiBulgaria okanye i-visa yabatyali mali eBulgaria?
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kunokusetyenziswa ngabemi beliphi na ilizwe kodwa imizekelo embalwa kukuhlala kwakhona kutyalo-mali eBulgaria ukusuka e-Asiya, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali eBulgaria ukusuka e-Afrika, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali eBulgaria ukusuka eYurophu, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali eBulgaria ukusuka eMzantsi Melika, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBulgaria usuka eMalaysia, Ukuhlala kwakhona ngokutyala eBulgaria usuka e-Bangladesh, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kwi-Bulgaria isuka e-Indonesia, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kwi-Bulgaria isuka eSri Lanka, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kwi-Bulgaria isuka eNepal, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kwi-Bulgaria isuka e-India nase-Residency. ngotyalo-mali kwiBulgaria ukusuka kwi-UAE.
Indawo yokuhlala yobungcali ngesiKhokelo kuTyalo-mali eBulgaria
Cela ukubonisana simahla malunga nokuhlala kwakho ngoTyalo mali eBulgaria
Amagama abalulekileyo kubuhlali ngokuTyala imali kwiBulgaria
Indalo esingqongileyo kunye neNkonzo yaManzi
Icandelo loMphathiswa Wezimali
Uqoqosho, Ezamandla kunye nelezokhenketho
URhulumente weRiphabhliki yaseBulgaria
Ezolimo kunye nezokutya
Icandelo Lophuhliso Lwezengingqi Nemisebenzi Yoluntu
Icandelo loMphathiswa Wezempilo
Ezothutho, iTekhnoloji yoLwazi kunye neCandelo lezoNxibelelwano
Icandelo labasebenzi kunye nomgaqo-nkqubo wabaphathiswa
Icandelo lezeMfundo, uLutsha kunye neSayensi
Icandelo leMfundo lezeMidlalo kunye neMidlalo
Hlanganisa kwi ISebe lokuFudukela eBulgaria , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko eBulgaria